Mareykanka Oo shidaal Dheeraad ah Weydiistay Sacuudiga | Afrikada
Mareykanka Oo shidaal Dheeraad ah Weydiistay Sacuudiga
Jul 3, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Golaha wasiirada boqortooyada Sacuudi Caraabiya ayaa Talaadadii maanta aqbalay codsiga boqortooyada ee ku aadan in Mareykanku uu la baxo shidaal dheeraad ah si uu u sii balaariyo xajmiga suuqyada caalamiga ah iyo deganaanshiyaha suuqyada shidaalka.
Warkan oo ay sii deysay wakaaladda wararka ee Saudi Press Agency (SPA) ayaa lagu sheegay in Boqortooyadu u heelan tahay codsiga uga yimid xukuummadda Mareykanka ee ah in ay ceelasha shidaalka ee boqortooyada ka bom-gareysato wax soo saar ka badan intii heshiisyadii hore dhigayeen isla markaasina ay qaadato shidaalkaasi dheeriga ah.
Kulan uu shir gudoomiyay Boqor Salmaan oo ay ka soo qeybgaleen golaha wasiirada ayaa uu boqorku ka codsaday golaha in la ambaqaado codsiga Mareykanka ee ah in uu la baxo shidaal dheeri ah.
US President Donald Trump ayaa Sabtidii sheegay in boqor Salmaan ay isku waafaqeen in la kordhiyo shidaalka Mareykanku ka dhoofisto Sacuudigu Waxaana Donald Trump uu si kajan ah warbaahinta uga hor yiri: “Xitaa waxaa laga yaabaa in ay tahay ilaa 2 milyan oo fuusto.”
READ MORE: DEG DEG:Akhriso Farmaajo Iyo Abiye Axmed Oo kala Saxiixday Heshiis "Inaan la isku Soo Xadgudbin"
Trump ayaa sheegay in heshiiska soo saarista shidaal intaasi ka badan lagu gaaray dhanka qadka taleefanka waxaana uu ka gaabsaday in uu sii faahfaahiyo waxyaalihii ay isla cayimeen labada mas’uul.
Labada hogaamiye ayaa lagu soo waramayaa in ay ka doodeen in dadaal dheeraad ah lagu bixiyo sidii ‘magdhow’ ama ka soo kabasho loo siin lahaa wadammada Saliidda soo saara lacala haddii ay yaraato saliida ay helaan.
Wadammada aan ka tirsaneyn ururka saliida oo uu ka mid yahay Ruushku ayaa bishii Juun 23-keedii taageeray dadaalkaasi isagoo Ruushku sheegay in arrintani looga gaashaamanayo dhibaatada kala dhex taallada wadammada xulufada Sacuudiga iyo Iiraan oo waayadan dambe dhibaatadoodu saameyn yeelatay.
Sacuudiga ayaa ah wadanka ugu shidaalka badan caalamka waxaana uu maalinkii soo saaraa shidaal nadiif ah oo dhan 1.5 milyan ilaa 2 milyan oo fuusto oo keyd ah marka loo eego xogta wakaaladda Tamarta Qiimeysa ee ‘United States Energy Information Administration.’ Waxaaa kale oo uu soo saaraa shidaalka ceyriin oo dhan 10 milyan oo fuusto sida uu shaaciyey ururka ay ku midoobaan wadammada shidaalka soo saara ee loo soo gaabiyo OPEC.
READ MORE: DAAWO Melania Trump oo ka degtay magaalada Nairobi